SumoMe: तपाईंको साइटको लागि लिड जेनेरेसन ... ठूलो समर्थनका साथ Martech Zone
शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० सोमबार, जनवरी 4, 2021 श्यान सुलिवान
म भर्खर पढ्दै थिएँ Jeff Goins 'वेबसाइट र केहि समेकनहरू याद गरें जुन मैले उसको WordPress साइटसँग पहिचान गरेको थिएन। मैले प्रयोग गरे WordPress थीम खोज केहि अनुसन्धान गर्न। जेफले भनिन्छ एक प्लगइन प्रयोग गर्दछ SumoMe द्वारा बनाइएको AppSumo। जब मैले SumoMe का सबै सुविधाहरू जाँच गरेँ, म प्रभावित भएँ।
मसँग प्लगइनहरूको बारेमा केहि प्रश्नहरू थिए र SumoMe टीमले सबैलाई उही दिन जवाफ दियो र जवाफ दियो। प्लेटफर्मको ग्राहक सेवामा खर्च गरिएको ध्यान त्यस प्रकारको देखेर खुसी लाग्यो।
SumoMe एक महान उत्पाद ब्रेकडाउन सिर्जना र बहु ​​सामग्री प्रबंधन प्रणाली प्लेटफार्महरु मा स्थापित गर्न सकिन्छ। कम्पनीको मुख्य फोकस हो वेबसाइट नेतृत्व उत्पादन। कम्पनी सीधा प्रभाव मा विश्वास गर्दछ। मलाई SumoMe उत्पादनहरू भत्काउन दिनुहोस्।
स्मार्ट पट्टी, सूची निर्माणकर्ता र स्क्रोल बाकसeNewsletter साइनअप क्याप्चर बनाउनुहोस् सरल र स्पष्ट छैन। SumoMe पहिले नै प्रस्ताव गर्दछ ग्राहक प्रशंसापत्र देखाउने बारेमा वास्तविक राजस्व लीड कर्षण.
नेतृत्व प्रोत्साहन प्रदान गरेर तपाईंको ईमेल ड्रिप अभियानहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
सामग्री एनालिटिक्स र तातो नक्शा कहाँ र कसरी पर्यटकहरू तपाईंको साइटमा सीधा पृष्ठहरू हेर्नुहोस्। र तपाइँ एक क्लिकको साथ अभियानहरू परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ।
शेयर डेस्कटप र मोबाइल क्षमताको साथ तपाईंको वेबसाइटमा सामाजिक। यसले सामग्री साझेदारी सहित पनि समावेश गर्दछ हाइलाइटर र छवि शेयरर.
सम्पर्क फारम कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न सजिलो तरीका प्रस्ताव गर्दछ।
SumoMe बहु योजनाहरू प्रदान गर्दछ, तपाईंको आवश्यकताहरू र बजेटमा निर्भर गर्दै, सहित व्यक्तिगत, बन्डल र प्रो। कसरी सिक्नुहोस् AppSumo को SumoMe अनुप्रयोगले छालहरू बनायो।
SumoMe WordPress प्लगइन स्थापना कसरी गर्ने
यदि तपाइँ वर्डप्रेसमा हुनुहुन्छ भने, स्थापना अझ सजिलो छ किनकि SumoMe ले पहिले नै डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्ने एक प्लगइन विकास गरेको छ। यहाँ कसरी छ:
टैग: सम्पर्क फारमहरूसामग्री एनालिटिक्सड्रिप अभियानहरूहाइलाइटरछवि साझेदारीनेतृत्व पुस्तासूची निर्माणकर्तास्क्रोल बक्सस्मार्ट बारसामाजिक साझेदारीsumo.meSumome
शन सुलिवान होस्ट हुनुहुन्छ रूपान्तरण कफी। जब उहाँ पोडकास्टिंग गर्दै हुनुहुन्न, तपाईं नेटवर्किंग घटनाहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, र धेरै चलचित्रहरूको उद्धरण गर्ने कफि शपहरूमा सीन पाउन सक्नुहुन्छ।
Strate रणनीतिहरू जुन मोबाईल अनुप्रयोगहरू परिवर्तन गर्दैछन्